MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၃:၂၅၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ (UTC)
—Thanks for the fish! talk•contribs ၁၈:၄၈၊ ၆ ဧပြီ ၂၀၂၁ (UTC)
You are invited to participate in the Roundtable Discussions about how to enforce the Universal Code of Conduct within the Wikimedia movement. There are two Zoom calls scheduled at 15 May and 29 May, both at 15:00-16.30 UTC. Please sign your name here if you are interested. Should you have any questions, please contact RamzyM (WMF). Thank you! MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၂၁:၄၈၊ ၅ မေ ၂၀၂၁ (UTC)
Dear Wikimedians: you are invited to participate in the next Roundtable discussion on the Universal Code of Conduct (UCoC). The next iteration would be held on Saturday, 12 June 2021, on 05.00-06.30 UTC (see your local time here). The forum would discuss how to enforce the Code of Conduct across Wikimedia projects and communities. Should you have any question, please direct it to Ramzy Muliawan. See you there! MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၉:၄၄၊ ၃ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၂၊ ၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ (UTC)
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၀:၄၀၊ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ (UTC)
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၆:၀၇၊ ၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၄:၅၁၊ ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
-- MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၁:၁၂၊ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
-- RamzyM (WMF) ၂၃:၀၈၊ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
—-- Message Translator of Language 'my'.. Pho Sai (ဆွေးနွေး) ၀၃:၀၄၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Best regards, RamzyM (WMF) ၀၈:၅၅၊ ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Best regards, RamzyM (WMF) ၀၇:၂၇၊ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
၁၀:၃၅၊ ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
RamzyM (WMF) ၁၈:၂၅၊ ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Best regards, RamzyM (WMF) ၁၀:၂၂၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Best, RamzyM (WMF) ၁၃:၃၉၊ ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၀၇:၅၄၊ ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
Best, RamzyM (WMF) ၀၈:၅၇၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
RamzyM (WMF) (talk) ၀၄:၄၈၊ ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)
--MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၃:၁၅၊ ၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
RamzyM (WMF) ၀၃:၁၂၊ ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
RamzyM (WMF) ၀၇:၁၄၊ ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), ဗုဒ္ဓဟူး ၆:၁၁, ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်&oldid=730407" မှ ရယူရန်
၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၀:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၀:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။